Maka ọdịnihu na-enweghị ngwa agha nuklia - World March
Home » Noticias » Pịa Ihe edeturu » Na-eche ọdịnihu na-enweghị ngwa agha nuklia
26 / 10 / 2020 site Antonio Gancedo
Mgbochi nke ngwá agha nuklia ga-emepe ọdịnihu ọhụụ maka mmadụ
-50 mba (11% nke ndị bi n’ụwa) ekwupụtala na ngwa agha nuklia megidere iwu.
- A ga-amachibido ngwá agha nuklia dịka ngwa agha kemịkal na kemịkalụ.
- Mba Ndị Dị n'Otu ga-eme ka Nkwekọrịta maka Mgbochi Ngwá Agha Nuclear na Jenụwarị 2021.
N'October 24, ekele nke nnabata nke Honduras, ọnụ ọgụgụ nke mba 50 ndị kwadoro nkwekọrịta maka Nkwechi Ngwá Agha Nuclear (TPAN) nke United Nations kwalitere. N'ime ọnwa atọ ọzọ, TPAN ga-abanye n'ike n'ike na mba ụwa na ihe omume n'isi ụlọ ọrụ United Nations na New York.
Mgbe ihe omume ahụ gasịrị, TPAN ga-aga n'ihu n'ụzọ zuru oke iji gbochie ngwa agha nuklia. Mba iri ise a ka ga-esonye site na 50 ndị bịanyere aka na ya TPAN ma na-echere nkwado na 38 ndị ọzọ rụrụ ọrụ ma kwado ihe okike ya na UN. Esemokwu nwere ike ibilite na mba ndị ọzọ n'ihi nrụgide sitere na ikike nuklia iji mechie uche ụmụ amaala, mana, n'ọnọdụ niile, ọ ga-abụ ụmụ amaala ga-eweli olu anyị ma mee ka gọọmentị anyị mee ihe. sonye na mkpu izugbe megide ngwa agha nuklia. Anyị ga-eme mkpọtụ a ka ọ na-etolite ruo mgbe ikike nuklia ga-adịwanye iche, ebe ụmụ amaala ha na-ekwu na ha sonyere ike nke ichebe udo ma ghara ịkwalite ọdachi.
Nnukwu nzọụkwụ nke na-emepe ohere ndị a na-apụghị ichetụ n'echiche ruo n'oge na-adịbeghị anya
Ntinye nke TPAN bụ nnukwu nzọụkwụ nke na-emepe ohere ruo mgbe na-adịbeghị anya enweghị atụ. Anyị na-atụle ya brik mbụ ewepụtara na mgbidi nke a ga-akwatu, ma nweta ya bụ ihe ịrịba ama na enwere ike ịga n'ihu. Anyị na-eche ihu ikekwe ozi kachasị mkpa n'ime iri afọ gara aga na ọkwa mba ụwa. Ọ bụ ezie na ọ nweghị otu akụkọ na mgbasa ozi gọọmentị (okwu nduhie), anyị na-ebu amụma na ike a ga-agbasa, na ngwa ngwa mgbe enwere ike ime ka omume ndị a zoro ezo na / ma ọ bụ nkwarụ site na ike ndị kachasị anya.
Onye isi okwu nke ihe a rụzuru bụ Mgbasa Ozi Mba Nile Iji Kpochapụ Ngwá Agha Nuclear (ICAN), onye mmeri nke Nrite Nobel Peace na 2017, nke gosipụtara na akaụntụ twitter ya mkpa ihe omume ahụ, nke ga-amalite ịdị ka nke Ọnwa Mbụ 22, 2021.
N'ime World March na nso nso a anyị achọpụtala na ọbụlagodi na mba ndị gọọmentị ha na-akwado TPAN, imirikiti ụmụ amaala amaghị maka eziokwu a. N'iburu ọnọdụ ụwa nke esemokwu na ejighị n'aka banyere ọdịnihu, n'etiti ọrịa a na-efe efe nke na-emetụta anyị, enwere saturation nke ihe mgbaàmà na-adịghị mma na "akụkọ ọjọọ". Ya mere, iji kwado ya n'ụzọ dị irè karị, anyị na-atụ aro ka anyị ghara imetụta egwu nke ọdachi nuklia dị ka onye na-eme mkpọtụ, mana, n'ụzọ megidere, iji mesie ihe kpatara ememme mmachibido iwu ahụ ike.
Njikọ Worldwa na-enweghị Wars na Ime Ihe Ike (MSGySV), onye otu ICAN, na-arụ ọrụ iji mee nnukwu emume na Jenụwarị 23 iji cheta usoro ihe omume a. Ọ ga-enwe ụdị usoro nke cyber-party. Ọ bụ atụmatụ a na-emeghe ma na-anabata ndị niile nwere mmasị, ndị na-eme omenala na ụmụ amaala ka ha sonyere ya. A ga-enwe njem nlegharị anya n'akụkọ ihe mere eme nile nke ịlụ ọgụ megide ngwa agha nuklia: mkpokọta, egwu, njem, ọgbakọ, ngosipụta, nkwupụta, mmemme agụmakwụkwọ, usoro mmụta sayensị, wdg. A ga-agbakwunye ụdị ọrụ egwu, ọdịbendị, nka na ụmụ amaala na-esonye maka ụbọchị Ememme Planetary.
Anyị ga-azụlite ọrụ a na nkwukọrịta na mbipụta anyị ọzọ.
Taa, anyị na-esonye na nkwupụta nke Carlos Umaña, onye ntụzi mba ụwa ICAN, bụ onye ji obi ụtọ kwuo, sị: "Taa bụ ụbọchị akụkọ ihe mere eme, nke na-egosipụta akara dị mkpa na iwu mba ụwa maka ịkwado ngwa agha nuklia ... N'ime ọnwa atọ, mgbe TPAN dị onye ọrụ gọọmentị, mmachibido iwu ahụ ga-abụ iwu mba ụwa. Otu a ka ọgbọ ọhụụ ga-esi amalite is Taa bụ ụbọchị olile anya ”.
Anyị na-ejikwa ohere a na-ekele ma na-ekele mba ndị kwadoro TPAN na ndị otu niile, otu dị iche iche na ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ma na-aga n'ihu ka mmadụ wee nwee ike ịmalite ije n'ụzọ nke na-eduga na mkpochapụ nke ngwa agha nuklia. Obu ihe anyi na emeko onu. Anyị chọrọ ịkpọtụrụ Peace Boat na, site na Japan, n'ụbọchị ememme ahụ, echetala ma mata ọrụ MSGySV rụrụ maka mkpọsa ICAN na TPAN na njem WW2 niile.
Anyị na-anọgide na-arụ ọrụ na onye ọ bụla maka udo na enweghị ike. N'ime mmemme ohuru emere atụmatụ, MSGySV ga - ejide webinar maka ụmụ akwụkwọ na ngalaba sitere na mahadum dị iche iche n'ime usoro nke ha nke odeakwụkwọ na-adịgide adịgide nke Summit nke Nobel Peace Laureates haziri na ọnwa ndị na-abịanụ. Isiokwu a ga - abụ: "Omume na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmụba mba ụwa ha"
Site na mkpali nke ihe ndị a na ọtụtụ omume ndị ọzọ na-abịa, anyị na-eme ka ọkwa anyị mere na October 2 jide 3rd World March maka Peace na Nonviolence na 2024.
Ndepụta mba ndị kwadoro TPAN
Antigua na Barbuda, Austria, Bangladesh, Belize, Bolivia, Botswana, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Guyana, Honduras, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Lesotho, Malaysia , Maldives, Malta, Mexico, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Palestine, Panama, Paraguay, Saint Kitts na Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent na Grenadines, Samoa, San Marino, South Africa, Thailand , Trinidad na Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam.
Enwere ike ịchọta ederede izizi na weebụsaịtị Pressenza International Press Agency: Mgbochi nke ngwá agha nuklia ga-emepe ọdịnihu ọhụụ maka mmadụ.